Somaliland: “Dadka Is-Jecel Ee Aragtida Ku Kala Gedisan Ka Daayaa Inaad Ku Tidhaahdaan Hebeloow U Jawaab Hebel” - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Dadka Is-Jecel Ee Aragtida Ku Kala Gedisan Ka Daayaa Inaad Ku...
Somaliland: “Dadka Is-Jecel Ee Aragtida Ku Kala Gedisan Ka Daayaa Inaad Ku Tidhaahdaan Hebeloow U Jawaab Hebel”
“Xukuumadda Waxaanu Kula Talinaynaa Waa in Sharciga La Ilaaliyo Oo Dadka Laga Daayo Naxliga Iyo Dhibaatada” Sh. Aadan Siiro
Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey (Sheekh Aadan-Siiro), ayaa Xukuumadda ugu baaqay inaan Qabaa’ilka reer Somaliland la kala dhex dhigan Khilaafaad Qaybiyo isla-markaana Mushkilad ku keena Dalka.
Sheekh Aadan-Siiro oo Khudbaddii Jimcaha ee Shalay kaga hadlay Arrimo badan oo ay ka mid tahay baahi ka jirta meelo ka mid ah Somaliland iyo hab-dhaqanka Masuuliyiinta Dawladda Qaarkood oo qoysaskoodu isticmaalaan Hanti ku filaan lahayd Dad badan, ayaa Xukuumadda kula taliyey inaan Hantida Ummadda laga qaado loo isticmaalin kala qaybinta Dadka Walaalaha ah.
Sheekha oo ugu horeyn is-barbar-dhigaya Nolosha Dadka danyarta ah iyo Nolosha Qoysaska Masuuliyiinta Dawladda, ayaa yidhi, “Markaad koonayaasha Hargeysa tagto meelaha qaarkood waxaad is odhanaysaa Malaha meeshani maaha meel Hargeysa ka mid ah dhibaatada Dadka ka muuqata awgeed. Madarasad aanu maalin dhawayd tagnay oo Nin Wadaad ahi nagu Casuumay. Haddaad Carruurta joogta halkaa Aragto qaar baa Kabo la’, Basaasta Carruurtaa ka muuqata iyo mushkiladda halkaa taalla ILAAHAY baa yaab kuu keenaya, innagoo og kuwa Talada haya Qaarkood siday u dhaqmaan, Siday u nool yihiin Qoysaskoodu iyo sida loogu soo adeego, waxaad is odhanaysaa Malaha intii ay Maalintii Kun Qoys isticmaali kari lahaayeen ayaa keligood loogu soo adeegaa. Waa Waxyaabaha Maanta lagu faano inaad Agoonta Waxooga indhaha qabato, in wax Magaalo dhan ka dhexeeya Keligaa iska qaadato, in wixii Mashaariic la bixiyey ee Somaliland oo dhami u bakhtiyeysay ay Kooxi iska qaadato.”
Sheekha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay, “yaa Maanta ugu Faqri badan oo Hantida Ummadda booba, yaa Maanta ugu faqri badan oo qalbigoodii faaruq yahay ? inta Magacyada leh, inta markoodii hore beystaynu haystay weeyaan kuwa boobaya Dhulka Ummadda, Agoonta iyo inta Jilicsan. Waar Haddaad Shantaada Salaadood ka adkaato, Xaaraantana ka dhowrsanaato (Waxaad ka mid noqonaysaa) kuwaa Rasuulku leeyahay ILAAHAY iyo Rasuulkiisa ayay jecel yihiin oo sidaa ayay ku nabad-gelayaan (Qiyaamaha).”ayuu yidhi, waxaanu intaa sii raaciyey, “Nin ka mid ahaa Aa’imadii Muslimiinta ayaa yidhi ‘Hadduu xaqu kaaga yimaaddo Qof aad neceb tahay Qaado. Haddii Qof ku keeno Arrin khaldan dhinac iskaga tiiri oo ku celi, haba noqdo Qofkaasi Qof aad aad u jeceshahay’. Kaasi waa Miisaanka uu Islaamku ku miisaamay Dadka aad is-raaceysaan iyo kuwa aad diidayso.”
Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud, waxa uu Xukuumadda ugu baaqay in aanay khilaaf kala dhex dhigin Qabaa’ilka Somaliland, “Xukuumadda waxaanu kula talinaynaa waar Qabaa’ilka ha qaybinina, waar ka daaya inaad Hantida Ummadda ku qaybisaan Dadka is-jecel ee Aragtida uun ku kala gedisan. Inaad tidhaahdaan Hebeloow u jawaab hebel, Hebeloowna u jawaab hebel, iyadoo Ujeeddadiinu tahay marxalad laga gudbayo oo aanay Dadku ku kala tagayn inaad ku qaybisaan. Haddaad Lacag aad leedihiin ku qaybinaysaan (Dadka) waxba may ahaateen, laakiin Islaanta Suuqa la fadhida Daasadda Tamaandhaha ah ee Shanta Subaxnimo soo kalahaysa ee Carruurteeda qaarkood baahi darteed badaha u galeen, Haddii Adigana uu Go’aankaagu noqdo inaad Dadka ku qaybiso Shanta boqol ee Islaantaa laga qaado oo aad Dadka khilaaf dhex gelisaan (Waa dhibaato), markaa waa in Sharciga la ilaaliyo oo Dadka laga daayo khilaafka, Naxliga iyo dhibaatada lagu abuurayo Dadka Walaalaha ah.”
Somaliland: Milicsiga Waraysigii Axmed Siilaanyo Ee BBC-da Ee Gudo-galkii Burco 27 May 1988
Kenya: 141 arday oo ka mid ah ardayda Jaamacadda Nairobi oo ku dhaawacmay Magaalada Nairobi
Former Somali lawmaker says he knows hotel suicide bomber
Deg Deg: Saxaafad Oo Loo Diiday Inay Gudaha U Soo Galan Heshiiska Dp World Ee Dekedda Berbera
Somaliland: Maxaa ka jira in Aqoonyahan Jamaal uu Marwadda Koowaad Ka Dalbaday Dhul Istaraatiiji Ah Oo Ku Yaala Xeebta Barbara